Dowladda Somalia oo xirtay gudoomiyihii & duqii degmada Buulo-barde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay gudoomiyihii degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan, C/caziiz Duurow iyo duqii degmadaas kadib markii lagu eedeeyey iney leexsadeen raashin gargaar ah, kaasoo dhawaan dowladda Soomaaliya geysay degmadaas.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labadaas mas’uul la xiray kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta qaranka, booliska iyo Nabadsugidda.
“Waxaa xiran gudoomiyihii iyo duqii degmada Buulo Barde, waxaana loo xiray iney si sharci darro ah u maamuleen raashin kaalmo ah oo halkaas la geeyey” ayuu yirr Axmed Cali Daahir.
“Waxaa sidoo kale la xiray ganacsatadii raashinkaas sida sharci darrada ah ku iibsaday iyo dad isku dayey iney sharci darradaas difaacaan” ayuu sidoo kale yiri Axmed Cali Daahir.
Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in ciidamada amaanku soo qabteen inta badan raashinkii ragaas leexsadeen, wuxuuna tilmaamay in muddo todobaad ah maxkamad lagu soo taagi doono.
“Dadkaan dambiga ay galeen waa qirteen, waxaana howlgalka la qaaday iyadoo dambigu socdo oo faraha lagula jiro oo raashinkii baqaaro lagu gurayo, maxkamadda ku shaqada leh ayaan muddo todobaad ah lagu soo taagi doonaa” ayuu sidoo kale yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Mas’uuliyiinta la xiray ayaa loo heystaa iney lunsadeen raashin loo weday dad magaaladooda Alshabaab go’doomiyeen oo dhibaato ba’an heysatay, wuxuuna yiri Xeer Ilaaliyaha Guud yiri “Waxaana wax laga xumaado in la lunsado raashinka shacab dhibaateysan loogu talo-galay. Ma ogolaan doonno kamana harayno dadka falalkaas oo kale geysanaya ee ay ku caddaato lunsashada hantida dadweynaha”.
Raashinka la lunsaday ayaa todobaadyo badan u dhaxeeyey Muqdisho iyo Buulo Barde, waxaana markii Jalalaqsi laga qaaday milateriga Soomaaliya iyo AMISOM muddo u galbinayey jidka kusii jireen muddo saddex maalmood ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay u xirtay gudoomiyihii degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii lagu eedeeyey inuu si aan sharci aheyn ganacsato ugala shaqeeyey iney dhuxul ka dhoofiyaan halkaas.
Sidoo kale, waxaa maalmo ka hor Muqdisho lagu xiray gudoomiyaha degmada Xamarweyne, iyadoo lagu eedeeyey iney leexsaday raashin mucaawino ah, hase ahaatee waa la sii daayey saacado kadib.